Tameelay - Page 158 of 158 - Knowledge & Motivation
မာနတွေ ပြိုင်နေတာလား ခဏလောက်ရပ်ပြီး စေတနာချင်း ပြိုင်ကြည့်ပါလား။
မာနတွေ ပြိုင်နေတာလား ခဏလောက်ရပ်ပြီး စေတနာချင်း ပြိုင်ကြည့်ပါလား။ အလှတွေ ပြိုင်နေတာလား ခဏလောက်ရပ်ပြီး စိတ်ထားချင်း ပြိုင်ကြည့်ပါလား။ ပိုင်ဆိုင်မူှတွေ ပြိုင်နေတာလား ခဏလောက်ရပ်ပြီး အေးချမ်းမူှကို ပြိုင်ကြပါလား။ ပညာတွေ ပြိုင်နေတာလား ခဏလောက်ရပ်ပြီး လူသားကောင်းကျိုးကို အတူတူလုပ်ကြည့်ပါလား။ ကျော်ကြားမူှတွေ ပြိုင်နေတာလား ခဏလောက်ရပ်ပြီး နိူင်ငံ နှင့် အမျိုးဘာသာသာသနာအတွက် ကြိုးစားကြည့်ပါလား။ ဂုဏ်ပကာသနတွေ ပြိုင်နေတာလား ခဏလောက်ရပ်ပြီး ဆင်းရဲသားတွေကို ဝိုင်းဝန်းပေးကမ်းကြပါလား။ လောဘတွေ ပြိုင်နေတာလား ခဏလောက်ရပ်ပြီး နိမ့်ကျနေသူတွေရဲ့ ဘဝကို မြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါလား။ အမြင်မတူညီမူှတွေကို ငြင်းခုံနေမှာလား ခဏလောက်ရပ်ပြီး သူ့အတွေး ကိုယ့်အတွေးကို ညှိကြည့်ပါလား။ အတ္တတွေ ပြိုင်နေတာလား ခဏလောက်ရပ်ပြီး ကြားထဲက မြေစာပင်လေးတွေကို သနားကြည့်ပါလား။ မိတ်ဆွေ….. အားနည်းချက်ရှိနေသူအချင်းချင်း ပြိုင်သင့်တာကိုပြိုင်ပြီး မပြိုင်သင့်တာကို နှစ်ဦးစလုံးလျော့ချ … Read more
Categories General Knowledge, Tameelay Knowledge Tags 11
မင်း လူတွေကို မလိုအပ်ပဲ ရင်မဖွင့်မိစေနဲ့..တစ်ယောက်ထဲလဲ နေတတ်အောင်နေပါ။
မင်း လူတွေကို မလိုအပ်ပဲ ရင်မဖွင့်မိစေနဲ့..တစ်ယောက်ထဲလဲ နေတတ်အောင်နေပါ။ မင်း စိတ်ညစ်နေလား_? ငါ ဒီလိုနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီး ကိုပါကို ပြန်ထိန်းပါ။ ဘဝအတွက် လေ့လာသင်ယူပါ စာများများဖတ်ပါ။ သူများကို သွားပြောတာထက် အများကြီးသာတယ်။ မင်း ဝမ်းနည်းနေလား_? ခဏလောက် အားရပါးရ ငိုချပစ်လိုက်ပါ။ ဘယ်သူ့မှ ပြောမနေနဲ့ .. ပိုးပြီးမျက်ရည်ကျအောင်လုပ်မဲ့သူပဲရှိတယ်။ ငိုစရာရှိတာ ကိုပါကို ငိုချလိုက် ပြီးရင် တည်ငြိမ်လာလိမ့်မယ်။ မင်း အရမ်း မွန်းကြပ်နေလား_? သီချင်းလေးဘာလေး နားထောင် စိတ်ပြေလက်ပျောက် ဖြစ်အောင်နေပါ။ သူများကို သွားပြောရင်.. မွန်းကြပ်တာကနေ ထွက်ပေါက်ပါ ပိတ်သွားလိမ့်မယ်။ မင်း စိတ်ဓာတ်ကျနေလား_? ဘာအားငယ်စရာရှိလဲ စိတ်ဓာတ်ကျတာ မင်းအပြစ် မဟုတ်ဘူး .. လူတိုင်းကျတတ်တာပဲ .. ကိုယ်ပါကို ပြန်ပြီး ဆွဲမတင်နိုင်မှ … Read more
ချစ်သူတွေကြားမှာဖြစ်စေ ” လင်မယားတွေကြားမှာဖြစ်စေကိုယ်ဘယ်ရောက်နေတယ်.. ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့.. massage လေးတစ်ကြောင်းက တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးဘယ်လောက် အလေးနက်ထားတယ်ဆိုတာကို သိသာစေပါတယ် ။ တကယ်တော့လူတွေပြောနေကြတဲ့ ” ချစ်တယ် ” ဆိုတဲ့စကားဟာ လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးပိုပြီးနီးစပ်စေတာကလွဲပြီးရင်ဘတ်ထဲကိုတော့ မထိရောက်စေပါဘူး ။ ချစ်တယ် ဆိုတဲ့စကားကို ကြိုက်သလောက်ပြောပါစေ သူငါ့ အပေါ်တကယ်ချစ်ပါလား ” သူ ငါ့ကိုတကယ်ချစ်တာပါ ” ဆိုတဲ့ အသိကလွဲပြီး ကိုယ့်အပေါ် ဂရုတစိုက်နဲ့အလေးအနက်ထားတဲ့ အပြုမူလိုတော့ ရင်ဘတ်ထဲမှာ မလေးနက်တာတော့အမှန်ပါ ။ ဂရုစိုက်ခြင်း ‘ ကြင်နာယုယခြင်း ‘ နွေးထွေးတဲ့မေတ္တာတရားစသဖြင့် အကြောင်းတရားတွေဟာ ” အချစ် ” ဆိုတဲ့ပေါင်းကူးတံတားက စတင်ခဲ့တာမှန်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ တချို့တွေက အချစ်ဆိုတဲ့ ပေါင်းကူးတံတာကိုတော့ကျော်လွှားခဲ့ပါရဲ့ တဖက်ကမ်းလည်းရောက်ရော ရှေ့ဆက်မသွားတော့ဘူး ရပ်တန့်နေခဲ့တယ် ။ … Read more
Categories General Knowledge, Love Tags 11
“Rice ATM” တဲ့ …အတုယူဖို့ပါ … ဗီယက်နမ်မှာ ဆန် ဝေတဲ့ ပုံစံပါ …
ကိုထွဋ်ထိပ် တင်ထားတဲ့ Post လေးကိုသဘောကျလို့ သမီးလေးတို့အတွက် ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ် “Rice ATM” တဲ့ …အတုယူဖို့ပါ … ဗီယက်နမ်မှာ ဆန် ဝေတဲ့ ပုံစံပါ … – ခလုတ်လေး နှိပ်လိုက်ရင် ပိုက်ထဲက သူ့အလိုလို ဆန် ထွက်ကျလာတယ် – တခါ ထွက်ရင် 1.5kg ထွက်တယ် – ၂၄ နာရီ လာယူလို့ရတယ်၊ ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ဝေမျှပေးမယ်၊ လူမတိုးစေချင်လို့၊ လူစုလူဝေး မဖြစ်စေချင်လို့ ဒီလို စီစဉ်ရတာ တဲ့ – ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် လာယူလို့ရပေမဲ့ ဆင်းရဲတဲ့သူတွေသာ ယူကြပါ၊ ငွေးကြေးတတ်နိုင်သူတွေက ဆင်းရဲတဲ့သူတွေအတွက် ချန်ထားပေးပါ တဲ့ – အခုကျင့်သုံးတဲ့ စနစ်ဟာ trust system လူထုအပေါ် … Read more
Categories facebook ပေါ်မှ သိမှတ်ဖွယ်ရာများ Tags 11